Shuangye nyowani yemagetsi bhasikoro remigwagwa ine 36V bhatiri | ebike Shuangye
musha Products electric bike motokari yemugwagwa Shuangye nyowani yemagetsi bhasikoro remigwagwa ine 36V bhatiri
Motokari: 36V 250W isina girazi isina mabhururo-mota
Max kumhanya: 25 km / h
Bhatiri: 36V 8AH / 10AH lithiamu bhatiri
motokari yemugwagwa kuenzanisa kwekare uye kutsva
Shuangye achangokwidziridzwa emagetsi emigwagwa bhasikoro ine 36V 8AH / 10AH bhatiri, uye 36V 250W / 350W isina brushless mota. Uku kusimudzira kunonyanya kuratidzwa mune zvinotevera zvinhu:
Yokutanga ndiyo motokari yemugwagwa furemu. Furemu yakazara yakareba. Inofananidzwa neiyo yapfuura furemu, iyo yakakwidziridzwa urefu hwemuviri hwakawanda zvinoenderana nekukwirira kwevanhu muEurope neAmerica, uye chiitiko chekutasva chichava chakasununguka.
Yechipiri ndeye kukwidziridzwa kwebhatiri mukati me motokari yemagetsi bhasikoro furemu. Sero rebhatiri richasungwa nechubhu isina mvura, inogadzirisa dambudziko rekukuvara kwebhatiri kunokonzerwa nemabhasikoro emumigwagwa anopinda nyore nyore mumvura. Uye pachave neburi rakavanzika kumberi kwemotokari, kuburikidza naro bhatiri rinogona kuburitswa nyore nyore.
Chechitatu ndiyo motokari yemugwagwa matai. Matai anoshandisa yakadzikama 700 * 35C, iyo inogona kutakura huremu hwakawanda, uye inogadzirisa dambudziko remabhasikoro emumigwagwa ayo ari nyore kubaya nekuti matai akaonda.
Chechina ndechekuti icho chose magetsi raod bhasikoro inotora isina mvura inokurumidza-kuburitsa dunhu, inova nyore mukuchengetedza kweramangwana.
mota yemagetsi bhasikoro mota
36V 250W / 350W hub brushless mota, max kumhanya kubva 25 kusvika 30KM / H. Kumashure mota inopa simba rakawanda uye kuita kuri nani. Magetsi emigwagwa emabhasikoro anoshandisa kumashure-vhiri mota yekutyaira, inova yakachengeteka uye inoshanda zvakanyanya kupfuura kumberi-vhiri dhiraivhu. Iyo 80% mota inoshandura mwero inogona kunyatso shandura simba remagetsi kuita mehendi simba kuti ipe simba emabhasikoro emagetsi. Chinonyanya kukosha kutaura ruzha rwayo rwakaderera, zvakaderera se60 dB, ichipa ruzivo rwakasununguka uye rwakaderera-ruzha rwekutasva.
magetsi emagetsi bhasikoro bhatiri
36V 8AH / 10AH lithiamu bhatiri haina mvura, renji 40-60KM pamubhadharo, uye iyo yekuchaja nguva 4-6 maawa nenguva. Bhatiri ine maratidziro maviri, uye kune akasiyana masimba ematanho zvichienderana nemabhatiri akasiyana. Imwe ndiyo yakajairwa standard 36V 8AH bhatiri kugona, uye imwe yacho yakakwidziridzwa vhezheni 36V 10AH (LG bhatiri sero) bhatiri kugona. Kana iwe uine zvimwe zvinodiwa zve mileage, saka 36V 10AH inogona kunge iri sarudzo yako iri nani. Yedu cruising renji / kuchaja kunogona kusvika makiromita makumi mana-40.
magetsi emagetsi bhasikoro LCD kuratidza
Iyi isina mvura uye yakawanda multifunction LCD inoratidzira, inoratidza kumhanya, simba, tembiricha, huwandu, zvichingodaro ... Zvakare, iwe unogona kugadzirisa iyo PAS nhanho (kubva 0-5), iyo yepamusoro nhanho iwe yaunogadzirisa, iyo yekukurumidza kumhanya iwe yaunowana, uye shandisa simba shoma. Iyo LCD inoratidzira haina mvura, unogona kuchovha iyo e-bhasikoro muzuva rekunaya pasina dambudziko.
mota yemagetsi bhasikoro isina mvura & inokurumidza kusunungura tambo
Iyo yemagetsi yemagetsi bhasikoro inotora isina mvura yekukurumidza-kuburitsa tambo, iyo inova nyore mukuchengetedza kweramangwana. Uku kusimudzira kunovandudza dambudziko rekuti mabhasikoro emagetsi emagetsi anowanzo kukuvara kwemvura kudunhu. Kunyangwe kana iwe uchizviita iwe pachako, iwe unogona nyore kuzvichengeta.
Kana iwe uri kufarira yedu Shuangye nyowani yemagetsi bhasikoro remigwagwa ine 36V bhatiri, ndokumbirawo usiye meseji yako pazasi, isu tinosangana newe nekukurumidza sezvazvinogona Kana iwe unogona kushanyira yedu yepamutemo webhusaiti: www.zhsydz.com
Tags:motokari yemugwagwa road bike panzira yemagetsi bhasikoro magetsi kubva mumigwagwa yemigwagwa
Prev: Nyanzvi dzemigwagwa mabhasikoro emagetsi 700C * 35C